Ogaden News Agency (ONA) – Standard – Dawladda Itobiya oo qarka u saaran inay ka shalwato haadaan
Standard – Dawladda Itobiya oo qarka u saaran inay ka shalwato haadaan
Kenya waxay ka mid tahay dawladaha sida aadka ah ula socda arimaha hoose ee Itobiya sababtoo ah isbadalka ka dhaca Itobiya saamayn xoog leh ayuu ku yeelanayaa gaar ahaan Kenya oo xidhiidh soke la lehayd Itobiya.
Wargayska Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maqaal aad u qota dheer ka qoray todobaad ka dib markii la iclaamiyay inuu dhintay KT Meles zanawi oo tilmaantay looltan adag inuu ka dhex socdo Golaha-siyaasi (politburo) ee EPRDF taasoo muujinaysa inuu qalaaqal xoogan oo siyaasi ah iyo kala daadasho uu ku soo fool leeyahay xisbigaa.
Waxaa awooda ku looltamaya oo isku haysta ku-simaha Raisal wasaaraha Hailemariam Deselgan, ninkii looga qaaday jagada Wasiirka Arimaha Dibadda ahna Safiirka dalka Shiinaha Seyom Misfen iyo afadii uu ka geeriyooday Aseb Mesfin, kuwaasoo ay ku tilmaantay jariidada inuu midba midka kale baab’inayay xataa intaan la shaacinin dhimashada Meles.
Inkastoo si tartiib ah loogu sii dhiibay jagada Mr. Deselgn todobaadkii hore, hadana waxaa hoosta ka shidnaa dagaal adag oo u dhexeeyay garabka TPLF, iyadoo xubnaha Qadaadweynta Tigreega ay dhamaantood u hanqal taagayaan inay qabtaan jagada R/wasaaranimada kuwaasoo kala ah Berhane Gabrecriticos, Dr Towdros Andenhom, Neway Gebraan iyo Azeb Mesfin.
Waxay sheegtay jariidada in xaaska uu ka dhintay Meles ee Azeb Mesfin ay iska soo sharaxday 2010 oy baarlamaanka ka soo gashay gobolka Tigree taasoo ujeedada ay ka lahayd uu ahaa inay hesho kalsoonida Tigreega si aan jagada haduu baneeyo saygeeda aan looga qaadin.
Dagaalka iyo tartanka qofka badali doona R/W Meles muddo ayay soo socotay sida uu sheegay Dr Ododa Opiyo oo yidhi dhowr jeeroo hore ayay xukuumadda Meles isagoo nool ku sigatay arintaa darteed inay u burburto markii muranka ka dhexeeya garabyadaa uu xoogaystay. Dr. Opiyo oo ah khabiir arimaha Geeska Afrika ku xeel dheer wuxuu sheegay intuusan dhiman Meles inuu arintaa aad uga walwalsanaa isagoo yidhi;
” Intuu noolaa Zanawi, ma ahayn oo kali ah Gudoomiyaha maamulkiisa, ee wuxuu ahaa ninka dhab ahaan gacanta ku haya xukunka oo qaanuunka siduu doono uga tasarufaya. Intuu hogaanka hayay wuxuu ka sifeeyay dalka Itobiya mucaarad ka horyimaada. Taasoo jirta ayuu ka cabsi qabay Meles in xisbiga dalka xukuma ee EPRDF dhexdiisa ay mucaarad kaga kacaan.”
Tilmaanta uu ka bixiyay Dr Opiyo dagaalka hoose ee ka dhex socday xubnaha TPLF ugu sareeya iyo siduu Zanawi u maareeyay oo xubnaha xisbiga ay uga wada cabsanayeen waxaa ka mid ah; Xabsigii uu dhigay 6da sano Wasiirkiisii gaashaan-dhiga ee ahaa saxiibkiisii ugu dhowaa ee la qorsheeyay dagaalkii lagu qaaday Eretreeya Seeye Abraha iyadoo lagu eedeeyay waxyaaba aan jirin. Sidoo kale markuu arkay inay korodhay sumcadii iyo awoodii Wasiirkiisii Arimaha Dibadda Siyom Mesfin, wuxuu ka qaaday jagadii wuxuuna u magacaabay safiirka Shiinaha. Arimahaa ayaa keenay hadda in dadkii uu casilay ee dulamka tirsanayay ay u xusul duubaan inay soo ceshadaan awoodoodii iyo sharaftoodii.
Dr. Maxamad Cali oo khabiir ku ah siyaasadda Itobiya tan iyo markii laga eryay xukunka Mengisto, wuxuu yidhi isaguma, Dagaalka (power struggle) ka dhex socda TPLF wuxuu saamayn doona inuu xisbiga EPRDF sii wadajiri doono dhimashada Zinawi ka dib. Afadii uu ka dhintay Meles ayaana fure u ah qofka qaban doona jagada.
Wuxuu intaa raaciyay Dr. M. Cali in Azeb Mesfin ay tahay naag adag oo aan si sahlan loo dhaqaajin karin. Si kastoo ay wax dhacaan buu yidhi, ururada mucaaradka ah waxay heliyaan fursad ay looltanka ku soo galaan.
Waxay kaloo sheegtay jariidada Standard mudane ka socda aqalka Congress-ka mareykanka oy wareysteen inuu fikrad midd la mid ah uu ka qabo arimaha ka socda Itobiya oo uu ku tilmaamay dal muhiim ah oo xasiloonaa.